WARBIXIN: Jawaari oo markale guuleystay. | Allshacabka
WARBIXIN: Jawaari oo markale guuleystay.
11 Jan (Allshacabka)- Xildhibaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa loo doortay mar labaad inuu noqdo guddoomiyaha baarlamanka cusub ee Soomaaliya kadib doorasho maanta ka dhacday xarunta golaha shacabka ee Muqdisho oo aad sidaas u adkeyn.
Jawaari, ayaa waxa uu ka adkaaday saddex musharax oo kale oo xilkan kula loolamayey kuwaas oo kala ah xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xiddig, xildhibaan Cabdiftaaax Ibraahim Geeseey iyo xildhibaan Idirs Cabdi Takar, waxaana ugu adkaa Xiddig oo ay Somaliland wadatay beel ahaana kasoo jeeda Beesha Daarood.
Jawaari, ayaa ku adkaaday wareegii koowaad ee doorashada, waxaana natiijada horudhac ay muujineysaa inuu helay 143 cod, halka xildhibaan Xiddig oo kaalinta labaad galay uu helay 97 cod, sida uu wariyahayga Moqdisho soo sheegayo.
Jawaari, ayaa ahaa guddoomiyaha baarlamanka hore ee Soomaaliya ee intii u dhaxeysay 2012 illaa 2016, waana saaxiibka koowaad ee Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halka uu dagaal siyaasadeed kala dhaxeeya Madaxweynaha koonfur Galbeed Shariif Xassan Sheekh Aadan.
Baarlamanka Soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale Berri qaban doonaa doorashada guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo kan labaad, oo musharaxiin aad u tiro badan ay ku loolamayaan oo xiiso gaar ah leh.